काँग्रेस बैठकमा लफडा, बैठक स्थल छोडेर हिडे देउवा — Imandarmedia.com
काँग्रेस बैठकमा लफडा, बैठक स्थल छोडेर हिडे देउवा
काठमाडौ। नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा लफडा भएको छ। बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच चर्काचर्की भएको छ।
सभापति देउवा र नेता पौडेलबीच चर्काचर्की भएपछि देउवाले बीचमै बैठक छाडेका छन्। पौने चार बजेबाट सुरु भएको बैठककमा वरिष्ठ नेता पौडेलले तीनवटा प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।
पार्टीबाट मन्त्री बनाउँदा आफूखुसी किन गरेको भन्दै देउवासँग जवाफ मागेका थिए। पौडेलले प्रस्तावसहित जवाफ मागेपछि देउवा पनि झोक्किएका थिए।
देउवा झोक्किएपछि बैठक सुरु भएको केही बेरमै उठेर हिँड्न लागेका थिए। तर केही नेताले उनलाई समाएर बस्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि केही बेर बसेका देउवा पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा जानुपर्ने भन्दै बैठकबाट निस्किएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका दुईजना महामन्त्रीहरु गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच माओवादी केन्द्रसहितको चुनावी गठबन्धनलाई लिएर मत बाझिएको छ।
तीन दिनदेखि पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा एकजना महामन्त्री थापाले आफूलाई गठबन्धनको विपक्षमा उभ्याएका छन्। बैठकमा आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा महामन्त्री थापाले गठबन्धनलाई सैद्धान्तिक रुपमा पुष्टि गर्न नसकिने पनि बताए।
म चुनावी गठबन्धनको पक्षमा छैन। गठबन्धनलाई सैद्धान्तिक हिसाबले पुष्टि गर्न सकिँदैन उनले बैठकमा भने, देशभरका लाखौँ मतदातालाई रुखबाहेक अन्यत्र भोट हाल्न भन्ने हो भने तिनले भविष्यमा रुखमै भोट हाल्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ?
महामन्त्री थापाले अहिले माओवादी केन्द्रको हँसिया हथौडा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको कलम चुनाव चिन्हमा भोट हालेको कांग्रेस कार्यकर्ताले भविष्यमा रुखमा भोट नहाल्ने पनि बताए।
तर अर्का महामन्त्री शर्माले भने चुनावी तालमेल आवश्यक रहेको बताउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आफूलाई उभ्याए। बैठकमा सहभागी एकजना केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बैठकमा महामन्त्री शर्माले गठबन्धन आवश्यकता हेरेर गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
उहाँ विश्वप्रकाश शर्मा ले विगतमा नेपाली कांग्रेसले पाप्त गरेको मत र अन्यले प्राप्त गरेको मतको तथ्यांक पनि पेश गर्नु भयो एक केन्द्रीय सदस्यले भने, विगतको नतिजाको पनि विश्लेषणका आधारमा उहाँले तालमेल आवश्यक रहेको कुरा राख्नु भयो।
नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले गठबन्धन किन गर्ने र केका लागि गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन्। सोमबार केन्द्रीय पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कोइरालाले रुष्ट कार्यकर्तालाई सम्बोधन नगरी गठबन्धन कसरी गर्ने।
भनेर पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका हुन्। उनले प्रश्न गरे, सभापतिले एमाले बलियो भनेपछि कार्यकर्ताको मनोबल कसरी बढाउनु रु काँग्रेसको नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर कसरी माओवादीलाई बोक्न सकिन्छ र ?
मंसिरमा भएको महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग सभापतिमा पराजित भएका कोइरालाले माथिबाट गरिएको गठबन्धनलाई तलका कार्यकर्ताले मानेनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए।
कोइराला पछि बोलेका गृहमन्त्री समेत रहेका नेता बालकृष्ण खाणले गठबन्धनको सरकार बन्ने समयमा नै तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने सहमति भएको बताए । उनले त्यो सहमति काँग्रेसले तोड्न नमिल्ने बताए।
तर गठबन्धनको नाममा आफ्नो संगठन अलगथलग पार्न नहुने उनले धारण राखे। यस्तै नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानुपर्ने बताएकी छिन्।
पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन पुगेकी कोइरालाले आफ्नै दाईसमेत रहेका शेखर कोइरालालाई जवाफ दिँदै गठबन्ध गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
तेस्तै, प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग्ने आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई हप्काएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको सुधारको लागि पछिल्लो समय राम्रो काम गरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए।
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाईली ‘स्नेही’ ले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामाको माग गरेका थिए । उनले व्यापार घाटा बढेको, अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र सुधारको प्रयास नभएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मालाई बर्खास्त गर्न,
सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरेका थिए ।स्नेहीलगायत केही नेताहरुले हिजोको बैठकमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको कुरा आएको थियो ।तर, सभापति देउवाले भने अहिले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा नगर्नुहोस भन्दै सम्झाएका थिए।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवासँग नेकपा ९मओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको भेटवार्तामा अर्थमन्त्रीलाई कुनैपनि हालतमा नहटाउने समझदारी बनेको छ।
अर्थमन्त्री शर्मा भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटको सम्बन्धमा वित्तीय संघीयता सम्बन्धी बिज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफलमा व्यस्त छन्। उनले आफूले मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै काम गरेको बताउने गरेका छन्।